Mr. Vampire3(1987) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Billy Lau, Corey Yuen, Ka Lee, Lam Ching-Ying, Lui Fong, Pauline Wong Yuk-Wan, Richard Ng, Sammo Hung, Teddy Yip Wing-Cho, Wu Ma
Mr. Vampire3(1987) IMDb 6.9/10 ရထားသော ဒါရိုကျတာ Ricky Lau က ရိုကျကူးထား၍ Wing Keung Lo, Cheuk-Hon Szeto တို့က ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးရေးသားကာ သရုပျဆောငျ Ching-Ying Lam, Richard Ng, Billy Lau တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Comedy, Horror ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ….
တာအိုဘုနျးကွီးတဈယောကျသညျ သူ့ရဲ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ ဝိညာဉျနှဈကောငျကို မှေးကာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုနရော ရှာတဈရှာအရောကျတှငျ မကောငျးဆိုးဝါးဖမျးဆီးသူဆရာတဈယောကျနဲ့ တှကွေ့လရော ဆရာက သူ့ကို မကောငျးဆိုးဝါးနဲ့ အသကျမမှေးသငျ့ကွောငျး အကွံပေးနစေဉျ တကယျ့ ဆိုးရှားသော မကောငျးဆိုးဝါးမြားနှငျ့တကယျရငျဆိုငျရသောအခါ သူတို့နှဈယောကျပေါငျးပွီး ဖွရှေငျးကွပုံကို ဇာတျလမျးမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွညျ့ကွပါခငျဗြာ…
Mr. Vampire3(1987) IMDb 6.9/10 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ricky Lau က ရိုက်ကူးထား၍ Wing Keung Lo, Cheuk-Hon Szeto တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Ching-Ying Lam, Richard Ng, Billy Lau တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Horror ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….
တာအိုဘုန်းကြီးတစ်ယောက်သည် သူ့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝိညာဉ်နှစ်ကောင်ကို မွေးကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရာ ရွာတစ်ရွာအရောက်တွင် မကောင်းဆိုးဝါးဖမ်းဆီးသူဆရာတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ကြလေရာ ဆရာက သူ့ကို မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ အသက်မမွေးသင့်ကြောင်း အကြံပေးနေစဉ် တကယ့် ဆိုးရွားသော မကောင်းဆိုးဝါးများနှင့်တကယ်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းကြပုံကို ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…
Billy Lau Corey Yuen Ka Lee Lam Ching-Ying Lui Fong Pauline Wong Yuk-Wan Richard Ng Sammo Hung Teddy Yip Wing-Cho Wu Ma
Baan Yun-Sang Billy Lau Cheung Wing-Cheung Chow Gam-Kong Chu Tau Corey Yuen Gam Biu Hoh Kin-Wai Ka Lee Lam Ching-Ying Lee Chi-Git Lui Fong Pauline Wong Yuk-Wan Richard Ng Sammo Hung Teddy Yip Wing-Cho Wu Ma
Option2megaup.net 438 MB SD (480p)
Option3datbu.com 438 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 438 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 438 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 438 MB SD (480p)
Option 12 storage.msubmovie.com3GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 13 megaup.net3GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 datbu.com3GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 15 yuudrive.me3GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 16 sharer.pw3GB FHD DTS-HDMA 5.1